गर्मीमा निर्जलीकरणबाट बच्न प्रभावकारी हुन सक्छ यी ५ जुसहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्मीमा निर्जलीकरणबाट बच्न प्रभावकारी हुन सक्छ यी ५ जुसहरु !!
गर्मीले नेपालमा पनि जनजीवन प्रभावित गर्न थालिसकेको छ । प्रतिकूल मौसममा कारण व्यक्तिले नियमित खानामा प्रयोग हुने चिया र कफी जस्ता गर्मी खानाको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् । गर्मी मौसममा शरीरलाई चिसो राख्न मानिसहरू कोकाकोला जस्ता चिसो पेय पदार्थ पनि पिउने गर्छन् । तर केमिकल युक्त पेय पदार्थले शरीरलाई हानि गर्ने गर्छ । यस्तो अवस्थामा उत्तम विकल्प भनेको घरमै प्राकृतिक रूपमा जुस बनाउनु हो । कसरी हामी घरमा ताजा फलफूलबाट जुस निकाल्न सकिन्छ र कसरी हामी शरीरलाई डिहाइड्रेसनबाट जोगाउन सक्छौं ?
कसरी थाहा पाउने आफ्नो पाचन प्रणाली कमजोर छ
यी राशिका व्यक्तिहरुले गर्छन् प्रायः लब म्यारिज, आफूले सोचे अनुसार विताउँछन् जीवन !!
मेवा र तरबुजाको रस
मेवा र तरबुजाको जुस बनाउनका लागि तपाईंसँग यी दुई सामग्रीहरूको साथमा निम्बु र बरफ हुनुपर्छ । अब सबैभन्दा पहिले, कस्तुरी खरबुजा र मेवासँग निम्बुको रस र आइस क्युब्स थप्नुहोस् र चारै चीजहरूको मिश्रण बनाउनुहोस्। अब बनेको मिश्रण पिउनुहोस् । यसले शरीरमा पानीको अभाव पूरा गर्ने गर्छ । खरबुजाभित्र एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन सी र बिटा क्यारोटीन रहेको हुन्छ । जसले मूत्रपथमा हुने संक्रमण मात्र हटाउँदैन, अल्सर जस्ता समस्यासँग लड्न पनि मद्दत गर्छ। यसबाहेक यो रस वजन कम गर्न पनि उपयोगी हुन्छ ।
मह र पुदिनाको पातबाट बनेको रस
मह, पुदिनाको पात, उमालेको पानी र हरियो चियाको मिश्रण पनि गर्मीमा पिउनको लागि उपयुक्त हुने गर्छ । सबैभन्दा पहिले उमालेको पानीमा पुदिनाको पात, मह र चिया मिसाएर राख्नुहोस् । अब यस मिश्रणलाई ५ मिनेटसम्म त्यसै राख्नुहोस् । चिया ब्याग ५ मिनेटपछि हटाउनुहोस् र मिश्रणलाई केही समय चिसो हुन दिनुहोस् । यसमा बरफको केही टुक्रा थप्नुहोस् र बनेको रसलाई पिउनुहोस् । यसले पखाला, बान्ता जस्ता समस्याहरू हटाउन पनि मद्दत गर्ने गर्छ ।
सुन्तलाको रस बनाउन तपाईंले कालो नुन, सुन्तला, कागती र बरफको केही टुक्रा लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले यी तीन चीजलाई मिक्सरमा राख्नुहोस् र उनीहरूको मिश्रण तैयार गर्नुहोस् । अब त्यसमा रस निकाल्नुहोस् । यसो गर्नाले शरीरमा पानीको कमी पूरा हुन्छ । जसले संक्रमण हटाउनुका साथै शरीरलाई ताजा राख्छ। यस्तो अवस्थामा गर्मीमा सुन्तलाको रस पिउनु राम्रो विकल्प हो ।
यो यस्तो जुस हो जुन तपाईं केही मिनेटमा बनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंलाई धेरै सामग्री चाहिँदैन । तपाईंसँग निम्बु, चिनी, आइस क्युब वा चिसोपानी हुनुपर्छ। अब पहिले चिनीलाई चिसो पानीमा हाल्नुहोस् र त्यसबाट निचोरेर रस निकाल्नुहोस् । तपाईंले बनाउनु भएको र उपभोग गरेको मिश्रणमा आइस क्युब राख्नुहोस्। यस जुसको सेवन गर्नाले शरीर स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ। डिहाईड्रेसनको समस्याबाट बच्न निम्बू राम्रो विकल्प हो ।
मौसम र ​​महको रस
मौसम र महको जुस पनि शरीरमा डिहाइड्रेसनको लागि उपयुक्त विधि हो । यस्तो जुस बनाउन तपाईंसँग चुना, चिनी वा मह, भुटेको जीरा, चाट मसाला वा कालो नुन हुनुपर्छ । पहिले चुनालाई मिक्सरमा हाल्नुहोस् र यसको जुस निकाल्नुहोस्। उक्त रसमा महमा घोल्नुहोस् र यसलाई गिलासमा भर्नुहोस्। भुटेको जीरा र चार्ट मसलाको साथ अलिकति कालो नुन पनि थप्नुहोस् र केही आइस क्युब्स थप्नुहोस् । त्यसपछि जुस तयार हुन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
पेटलाई कसरी स्वस्थ र बलियो राख्ने ?
दिप जसरी चम्किन्छ यी ४ राशिका व्यक्तिको भाग्य, सानैमा कमाउँछन् नाम र दाम !!
यस्ता व्यक्तिहरुलाई हुन्छ क्यान्सरको उच्च जोखिम, यस्ता संकेत देखिए गराइहाल्नुहोस् जाँच !!
खाना खाएकै ठाउँमा थाल छोड्ने गर्नुभएको छ ? यस्तो बानीले कहिलै गर्न दिदैन प्रगती !!
अध्ययन भन्छ, ‘अत्याधिक खानाले गंभिर रोगको जोखिम’
जैविक खानाले गंभीर रोगको जोखिम कम गराउँछ !!